Isonka seBhasikithi, Ibhasikithi yokutya, Ibhasikithi enamavili-Prolink
Yinkampani yokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe enobungcali, ezona mveliso ziphambili zii-caps, i-raincoat, iingxowa, iifaskoti kunye nezipho zokwazisa. Zonke iimveliso zithunyelwa eYurophu naseMelika, kwaye kwihlabathi liphela.
Ngeli xesha, inkampani yethu ineqela elinye lobuchwephesha, ngokuqhubekayo lizama ukwenza uphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha, ukomeleza kunye nokuphucula inkqubo enemveliso kunye nenkqubo yolawulo.
Sineqela lobugcisa lobunjineli eliza kusebenzela zonke iimfuno ezizodwa. Iisampulu zasimahla zinokuthunyelwa kuwe ngokobuqu ukuze wazi iinyani ezingaphezulu.
Hebei Prolink Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
I-010001: ikepusi yentsimbi, ikepusi yentsimbi, ikepusi ...
I-6602: isiciko somqhaphu esinebrashi enzima, ikepusi enqamlezileyo
884: isikhafu esinithiweyo
I-694: ikepusi yasebusika, ikepusi yokukhuthaza
677: Ingubo yoboya obumhlophe bomhlaba, ingubo yokwazisa
524: Ikotoni yeCotton, ikepusi yesi-5, ikepusi yokukhuthaza
I-366: ikepusi yekepusi, ikepusi yepaneli yesi-6, ikepusi yefashoni
211: intengiso yejean cap
647: isikhafu esifudumeleyo isikhafu
467: iiglavu ezinithiweyo
020011: 6 iphaneli baseball caps
Hebei Prolink Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Trading Co., Ltd.ise Shijiazhuang City, kwiPhondo Hebei. Yinkampani yokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe enobungcali, ezona mveliso ziphambili zii-caps, i-raincoat, iingxowa, iifaskoti kunye nezipho zokwazisa. Zonke iimveliso zithunyelwa eYurophu naseMelika, kwaye kwihlabathi liphela.
Ngokunyuka okuqhubekayo kunye nokuphuculwa kunye nokuveliswa kweemveliso zethu, kunye nokuphuculwa komgangatho wenkonzo, kunye nokwandiswa kwamandla ethu okubonelela, kusenza sibe nabathengi ngakumbi kunye neemarike.
Ukuya kwi-128 ye-China yokuThengisa kunye nokuBonisa ...
Inkampani yethu iya kwi-128th yaseTshayina yokuThengisa nokuThumela ngaphandle, ngexesha elifanelekileyo, ngaphandle komboniso ...
Hebei prolink Rhweba ngaphakathi no Rhweba kumazwe angaphandle co.ltd.always ukubeka umgangatho kwindawo yokuqala. ukusuka ...
Hebei Prolink yokungenisa kunye Export Trading Co., Ltd.soloko ingqalelo uphuhliso lwemveliso kunye u ...